भारतमा कोरोनासंक्रमित हुने पहिलो सेलेब्रिटी कनिका भन्छिन्, ‘मलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आयो’ - हाम्रो देश
भारतमा कोरोनासंक्रमित हुने पहिलो सेलेब्रिटी कनिका भन्छिन्, ‘मलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आयो’
१० पुष २०७७
एजेन्सी : कनिका कपुर भारतमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण हुने पहिलो सेलेब्रिटी थिइन् । अहिले कनिकाले आफू संक्रमित भएपछि कस्तो–कस्तो आलोचना सहनुपर्यो भनेर खुलासा गरेकी छन् । कनिका कपुर कोरोना संक्रमित भएको खबर मार्च २०२० मा आएको थियो । त्यतिबेला उनले चर्को आलोचनाको सामना गर्नुपरेको थियो ।
कनिकाले थपिन्, ‘जब म मार्च ९ मा फर्किए, भारतमा क्वारेन्टिनको नियम लागू थिएन । १० मार्चमा सबैले होली खेले । त्यसपछि म आमा–बुवाकोमा लखनऊ गएँ । त्यसपछि १६–१७ मार्चमा मलाई ज्वरो आउन थाल्यो । त्यसपछि मैले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा २० मार्चमा नतिजा पोजेटिभ आयो । यदी मलाई थाहा भएको भए के म मेरो परिवार, विशेष गरेर मेरो ९० वर्षकी हजुरआमा, को जीवनलाई खतरामा पार्थे होला र ? मानिसहरुले मलाई विमानस्थलमा चेकजाँच नगरेको र नियम पालना नगरेको आरोप लगाए ।’
‘म निकै दुःखी र परेशान थिएँ किनभने मलाई ज्यान मार्ने धम्कीसम्म आइरहेको थियो । मानिसहरुले म मरे पनि हुन्थ्यो भन्थे । कयौँले मेरो करियर खत्तम भयो भनेर भने,’ उनले भनिन्, ‘कसैले यो सोचेनन् कि म एकल आमा पनि हुँ । आफ्नो छोराछोरीभन्दा टाढा रहेर कडा मिहिनेत पछि मैले आफ्नो करियर बनाएको हुँ । तर, एकै दिनमा मानिसहरु भन्दै थिए कि मेरो करियर खत्तम, जीवन खत्तम, तपाईं मर्नुहोस् ? यो कठिन समय थियो तर मेरो परिवार मेरो साथमा थियो । त्यो समय गुज्रियो र म पनि अघि बढेँ ।’